သားအိမ်-ကင်ဆာအကြောင်း သိကောင်းစရာများ ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 9:55 PM | No မှတ်ချက် | အမျိုးသမီးနှင့်ကျန်းမာရေး
သားအိမ်-ကင်ဆာ နဲ့ သားအိမ်ခေါင်း-ကင်ဆာ တူတူပါပဲလား။ မတူဘူး ဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုတွေ ခံစားရတတ်တယ်၊ ဘာလက္ခဏာတွေ ပြတတ်ပါသလဲ။ ဆေးရုံမှာ
စစ်မယ်၊ သွားမယ်ဆိုရင် သားအိမ်-ကင်ဆာ နဲ့ သားအိမ်ခေါင်း-ကင်ဆာ တူတူပဲ ရှိနေရင် သိရလား။ သို့မဟုတ် ၂ မျိုးခွဲ စစ်ရတာလား။ အင်္ဂလိပ်လို သားအိမ်ခေါင်း-ကင်ဆာကဘာ၊ သားအိမ်-ကင်ဆာကဘာ ခွဲပြောရလား။ အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လို စာလုံးပေါင်းပါသလဲ။
သားအိမ်-ကင်ဆာ Uterine Cancer နဲ့ သားအိမ်ဝ-ကင်ဆာ Cervical Cancer မတူပါ။
အခုရေးမှာက သားအိမ်-ကင်ဆာ ဖြစ်ပါတယ်။ Cervical Cancer (Ca Cx) သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ နဲ့ သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး (HPV) တွေကို တွဲဖတ်ပါ။
1. ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ သွေးဆင်းတာ၊ သွေးစွန်းတာ၊ ၉ဝ% လောက်က ကြားရက် ဒါမှမဟုတ်
သွေးဆုံးပြီးနောက် သွေးဆင်းတယ်။ အဲလိုဖြစ်သူတိုင်းလဲ သားအိမ်-ကင်ဆာတော့ မဟုတ်ပါ။ 2. ၁ဝ% လောက်မှာ အဖြူဆင်းတာမျိုးလို တခုခု ဆင်းတတ်တယ်။ 3. ဆီးသွားရတာ ပြဿနာရှိတာ၊ ဆီးစပ်နေရာ နာတာ၊ အိမ်ထောင်နဲ့ နေရင် နာတာတွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ 4. ဆီးစပ်မှာ အလုံး စမ်းလို့ရတာ၊ လူက ပိန်ပိန်လာတာဆိုရင်လဲ သတိရှိရမယ်။ ဒီလို ဖြစ်သူတွေက ရောဂါ နောက်ပိုင်းကျလာမှ ဖြစ်တတ်တယ်။
• Endometrial biopsy နည်းဖြစ်ဖြစ်၊ Dilation and curettage (D&C) နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အသားစ ထုတ်ယူ စစ်ဆေးမယ်။ Endometrial biopsy ကို အများဆုံး
လုပ်တယ်။ • Hysteroscopy နည်းလဲ လုပ်နိုင်တယ်။ Transvaginal ultrasound, Sonography, Cystoscopy and proctoscopy, Computed tomography (CT) နဲ့ Magnetic resonance imaging (MRI) နည်းတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ • Positron emission tomography (PET), Chest x-ray, Complete blood count, CA 125 blood test တွေပါ ဆက်လုပ်နိုင်သေးတယ်။
• Hormone levels ဟော်မုန်း ရှိတာ မတူကြဘူး။ (အီစထိုဂျင်) များရင် ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ သွေးဆုံးသွားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို Estrogen therapy ဟော်မုန်းပေး ကုရတတ်တယ်။ ကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Estrogen နဲ့အတူ Progesterone ပေးတာ ပိုကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခြားဟာတွေ ဖြစ်နိုင်ပြန်တယ်။ ဥပမာ ရင်သား-ကင်ဆာ၊ သွေးခဲရောဂါ။ • Birth control pills ကိုယ်ဝန်တားဆေးကြောင့် သားအိမ်ကင်ဆာ အဖြစ်နည်းစေတယ်လို့ ဆိုတယ်။ • တသက်တာမှာ ရာသီလာချိန်များရင် မကောင်းဘူး။ အပျို စောဖြစ်တာနဲ့ သွေးဆုံး နောက်ကျတာကို ပြောတာ။ • Pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာ များသူတွေမှာ အဖြစ်နည်းတယ်။ • Obesity အဝလွန်သူ အဖြစ်များမယ်။ အဆီထဲရှိနေတဲ့ (အီစထိုဂျင်) ကနေ တခုခုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ • ရင်သား-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဘို့နဲ့ ကုသဘို့မှာ သုံးတဲ့ Tamoxifen ဆေးကနေ နည်းနည်းလေး ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ • Ovarian tumors (Granulosa-theca cell tumor) ဖြစ်သူတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ • Polycystic ovarian syndrome (PCOS) ရှိနေသူလဲ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ • Intrauterine device (IUD) ကိုယ်ဝန်တား-ပစ္စည်းထည့်ထားသူတွေလဲ နဲနဲလေး ပိုဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ • Age အသက်ကြီးလေး ပိုလေ။ • Diet and exercise အဆီစားများသူ၊ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်သူတွေ ပိုများတယ်။ • Diabetes ဆီးချို ရှိသူတွေမှာ ၄ ဆ ပိုများတယ်။ • Family history မိသားစုထဲ တယောက်မက ဖြစ်တာလဲ တွေ့ရတယ်။ • Breast or ovarian cancer နို့-ကင်ဆာနဲ့ မျိုးဥအိမ်-ကင်ဆာ ရှိသူတွေမှာ လာဖြစ်တတ်သေးတယ်။ • Prior pelvic radiation therapy တခြားရောဂါကြောင့် ဓါတ်ကင်သူတွေ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ • Endometrial hyperplasia ရောဂါ ဖြစ်နေရင် ပိုနိုင်တယ်။
Endometrium Carcinoma အတွက် 2010 Figo staging system အရ ရောဂါအဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေက -
• IA သားအိမ်မှာသာရှိတယ်။ Myometrial invasion သားအိမ်အလည်လွှာရဲ့ တဝက်အထိ မရောက်သေးဘူး။ • IB သားအိမ်မှာသာရှိတယ်။ Myometrial invasion သားအိမ်အလည်လွှာရဲ့ တဝက်ထက် ကျော်ပြီ။ • II သားအိမ်မှာသာရှိတယ်။ Cervical stromal invasion သားအိမ်ဝထဲ ရောက်နေပြီ။ • IIIA သားအိမ်ဘေးက Serosa or Adnexa (တစ်ရှူး) တွေဆီ ရောက်နေပြီ။ • IIIB မွေးလမ်းကြောင်း (ဗဂျိုင်းနား) နဲ့ Parametrial involvement ဘေးနား ရောက်နေပြီ။ • IIIC1 Pelvic lymph node involvement အနီးအနားက တက်စေ့တွေဆီ ရောက်နေပြီ။ • IIIC2 Para-aortic lymph node involvement တခြားနေရာက တက်စေ့တွေဆီ ရောက်နေပြီ။ • IVA Bladder and/or Bowel mucosa ဆီးအိမ်၊ အစာဟောင်းအိမ်ထိ ရောက်နေပြီ။ • IVB Distant metastases တခြား အဝေးနေရာတွေဆီ ရောက်နေပြီ။
• Stage I = Surgery ခွဲစိတ်နည်း၊ Total Abdominal Hysterectomy and Bilateral Salpingo-Oopherectomy (TAH-BSO) ခွဲစိတ်နည်း။ ခွဲစိတ်အပြီး Radiation ဓါတ်ကင်နည်းမှာ Vaginal Brachytherapy (VB) နည်း ဒါမှမဟုတ် Pelvic Radiation ဒါမှမဟုတ် ၂ နည်းလုံး သုံးတယ်။ Chemotherapy ကင်ဆာဆေး အဖြစ် Carboplatin နဲ့ Paclitaxel, Ifosfamide with Paclitaxel ဆေးတွေ သုံးတာ များတယ်။ တခါတလေ Cisplatin, Ifosfamide နဲ့ Doxorubicin တွေကို သုံးတယ်။ ခွဲဘို့ မသင့်သူတွေကို ဓါတ်ကင်တာ လုပ်ပေးတယ်။ အဆင့် (၁) ကလေးလဲ လိုချင်သေးရင် မခွဲဘဲနဲ့ Progestin ဟော်မုန်းဆေးပေးနည်းလဲ သုံးတယ်။ အကောင်းဆုံး နည်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ခွဲစိတ်ပြီး ထပ်ဖြစ်သူတွေမှာ ဗဂျိုင်းနားမှာ
လာဖြစ်တတ်လို့ Vaginal Brachytherapy နည်းပါ လုပ်ပေးရတာ ဖြစ်တယ်။ တချို့ဆေးရုံတွေက Pelvic area တင်ပါးဆုံနေရာ တခုလုံးကို External beam radiation ဓါတ်ကင်နည်း လုပ်ပေးတယ်။
• Recurrent endometrial cancer ပြန်ဖြစ်ကင်ဆာဆိုတာ အနီးအနားလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဝေးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Pelvis တင်ပါးဆုံမှာဖြစ်ရင် Radiation therapy ဓါတ်ကင်မယ်။ တခြားနေရာဆိုရင် အဆင့် (၄) ကုသသလို လုပ်မယ်။ Progesterone hormone therapy ဒါမှမဟုတ် Chemotherapy လုပ်နိုင်တယ်။
ကင်ဆာဖြစ်ရင် ၅ နှစ်အထိနေနိုင်သူ ရာနှုန်းဘယ်လောက်လဲဆိုတာ သတ်မှတ်ထားရတယ်။
Endometrial adenocarcinoma သားအိမ်-ကင်ဆာ ဖြစ်သူတွေမှာ -
• သားအိမ်အပြင် မပြန့်သေးသူ ၉၆%၊ • သားအိမ်အပြင် ပြန့်နေသူ ၆၆%၊ • နောက်ပိုင်းအဆင့် ရောက်နေသူ ၂၅%၊ • African American women အသားမဲ အမျိုးသမီးတွေမှာ တခြားလူတွေထက် ၁ဝ% နည်းတယ်။
5 year survival rate တိတိကျကျ အဆင့်အရ ပြောရရင် -
• I-A 90% • I-B 88% • I-C 75% • II 69% • III-A 58% • III-B 50% • III-C 47% • IV-A 17% • IV-B 15%
• သားအိမ်အပြင် မပြန့်သေးသူ ၅ဝ%၊ • သားအိမ်အပြင် ပြန့်နေသူ ဝ-၂ဝ%၊
• Endometrial cancer သားအိမ်-ကင်ဆာက မျိုးပွါးလမ်းဖြစ်တာထဲမှာ အများဆုံး ဖြစ်တယ်။ သေဆုံးရမှုမှာ သတ္တမနေရာ လိုက်တယ်။ စောစောသိရင် ကုလို့ ရတာကို ပြနေတာ ဖြစ်တယ်။ အသက် ၆ဝ ကျော်တွေမှာ အဖြစ်များတယ်။ စောသိသူတွေကို ခွဲစိတ်ပြီးနောက် Estrogen replacement ဟော်မုန်း ဆေးပါပေးရင် ပြန်ဖြစ်နှုန်း နည်းတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီနည်းရဲ့ မကောင်း
ကျိုးဆက်တွေကို အသေအခြာ လေ့လာရတယ်။ Heart disease နှလုံးရောဂါ၊ Heart attacks နှလုံးသွေးနည်းတာ Stroke လေဖြတ်တာ နဲ့ Breast cancer ရင်သား-ကင်ဆာ ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ ဟော်မုန်းဆေးကို နဲနဲလေးနဲ့ ရက်တိုတိုသာ ပေးဘို့ လုပ်လာတယ်။
လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ အမဲ-အမျိုးသမီး တွေဟာ အဖြူတွေနဲ့ အာရှသူတွေထက် ၂ ဆ ပိုဖြစ်တယ်။
• Cervical cancer သားအိမ်ဝ-ကင်ဆာက တတိယလိုက်တယ်။ ကြားရက်သွေးဆင်းတာ နဲ့ တခုခုဆင်းတာ တွေမှာ သားအိမ်-ကင်ဆာနဲ့ တူတယ်။ သားအိမ်အဝမှာ ဖြစ်ရင် ယောက်ျားနဲ့ ဆက်ဆံအပြီးမှာလဲ သွေးထွက်လာ တတ်တယ်။ Human papillomavirus (HPV) ပိုးက လိင်လမ်းကနေ ဝင်တယ်။ စောစောသိအောင် Pap smears လုပ်နေသင့်တယ်။